OTU ESI EHICHA LAPTỌỌPỤ - ỤZỌ MAKA NDỊ NA-ABỤGHỊ ỌKACHAMARA - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ichapu laptọọpụ si n'ájá (ụzọ nke abụọ, maka ndị nwekwuo obi ike)
Laptọọpụ nke oge a, nakwa akwụkwọ ha kachasị mma - ultrabooks bụ ihe ngwaike zuru ezu, ngwaike, nke na-arụ ọrụ na-agbanye ọkụ, karịsịa na ebe ebe laptọọpụ na-arụ ọrụ dị mgbagwoju anya (ihe nlereanya kasị mma bụ egwuregwu nke oge a). Ya mere, ọ bụrụ na laptọọpụ gị na-agbanye ọkụ na ụfọdụ ebe ma ọ bụ na-ahapụ onwe ya n'oge kachasị anya, na onye na-akwado laptọọpụ ahụ na-ada ụda karịa ka ọ na-emekarị, nsogbu kachasị dị na laptọọpụ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ikike maka laptọọpụ ahụ anwụọla, mgbe ahụ ị ga-agbaso ntuziaka a n'enweghị nsogbu iji kpochapụ laptọọpụ gị. Ọ bụrụ na akwụkwọ ikike ahụ ka dị irè, mgbe ahụ, ị ​​ga-akpachara anya: ọtụtụ ndị na-arụpụta laptọọpụ na-enyefe akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-arụpụta laptọọpụ, nke bụ ihe anyị ga-eme.
Ụzọ mbụ ị ga-esi ehichapụ laptọọpụ - maka mmalite
Usoro nke ihichapu laptọọpụ si n'ájá bụ maka ndị na-amaghị nke ọma na kọmputa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịkwesighi ịdọrọ kọmputa na karịsịa laptọọpụ n'ihu, soro nzọụkwụ n'okpuru ma ị ga-enwe ihe ịga nke ọma.
Ngwa nhicha ederede
Ngwa ndi choro:
Screwdriver iji wepu ihe mkpuchi nke laptọọpụ
Ike ikuku nwere ike (ahia)
Mmiri dị ọcha na akọrọ ka a kpochaa ya.
Mgbochi ndị na-adịghị mma (nhọrọ ma na-achọsi ike)
Nzọụkwụ 1 - wepu mkpuchi azụ
Nke mbụ, gbanyụọ laptọọpụ gị kpamkpam: o kwesịghị ịnọ na ụra ma ọ bụ ọnọdụ mkpuchi. Wepu chaja ma wepu batrị ma ọ bụrụ na enyere gị aka.
Usoro iwepu ihe mkpuchi ahụ nwere ike ịdị iche, mana n'ozuzu, ị ga - achọ:
Wepu ihe mkpuchi na panel azụ. A ghaghị iburu n'obi na na ụfọdụ laptọọpụ ụdị, ihe nkedo nwere ike ịbụ n'okpuru mgbada roba ma ọ bụ akwụkwọ mmado. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe nkedo nwere ike ịdị n'akụkụ akụkụ nke laptọọpụ (na-emekarị n'azụ).
Mgbe ekpochapụrụ niile, wepụ mkpuchi ahụ. N'ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ, nke a chọrọ ịkwaga mkpuchi n'otu ntụziaka ma ọ bụ ọzọ. Mee nke a nke ọma, ọ bụrụ na ịchọrọ na "ihe na-egbochi ya", jide n'aka na ewepụrụla ihe niile.
Nzọụkwụ 2 - Nhicha onye na-akwado ya na radiator
Kọntaktị laptọọpụ kachasị ọhụrụ nwere usoro ntụrụndụ yiri nke ị nwere ike ịhụ na foto. Usoro ahụ dị jụụ na-eji kpo ọla kọpa nke jikọtara mgbagwoju kaadị vidiyo na onye na-emepụta ihe na onye na-akwado ya. Iji mee ka usoro nro dị jụụ dị ọcha, ị nwere ike iji swaji snooji maka nmalite, ma jirizie ike ikuku na-ehichapụ ihe ndị ahụ. Kpachara anya: mkpanaka maka ihe ọkụ na nchara radiator nwere ike ịda na mberede, a gaghịkwa eme nke a.
Ichacha ụlọ ọrụ kọmpụta nke laptọọpụ
Enwere ike ihichapu onye ahụ nwere ike ikuku. Jiri mkparịta ụka dị mkpụmkpụ iji gbochie onye ahụ na-akwado ya ngwa ngwa. Rịba ama na ọ dịghị ihe ọ bụla dị n'agbata onye ọhụụ. Nrụgide na onye ofufe ekwesịghị ịbụ. Ihe ọzọ bụ na ekwesịrị ikuku ụgbọ elu na-emechi ya n'enweghị atụgharị ya, ma ọ bụghị ya, ikuku mmiri nwere ike ịbanye na mbadamba, nke, n'aka nke ya, nwere ike imebi ihe ndị dị na kọmputa.
Na ụfọdụ akwụkwọ ederede ndị dị iche iche na ndị na-egbu mkpu. N'okwu a, ọ ga-ezuru imeghachi ọrụ arụmọrụ ndị a kọwara na nke ọ bụla n'ime ha.
Nzọụkwụ 3 - ntinye nhicha na mgbakwunye na laptọọpụ
Mgbe i mechachara nzọụkwụ gara aga, ọ bụkwa ezigbo echiche ịfụ ájá site na akụkụ ọ bụla ọzọ nke laptọọpụ site na iji otu ihe ahụ nwere ike ikuku.
Jide n'aka na ịghaghị eriri ọ bụla na njikọ ndị ọzọ na laptọọpụ ahụ, wee tinye ihe mkpuchi ahụ ma gbanye ya, na-alaghachi laptọọpụ ahụ na steeti ya. N'ọnọdụ ebe a na-ezobe ihe mkpuchi n'azụ agba ụkwụ, a ghaghị ịsị ha. Ọ bụrụ na nke a na - emetụkwa na laptọọpụ gị - jide n'aka na ị ga - eme nke a, na ebe ebe oghere ventilada dị na ala nke laptọọpụ ahụ, ọnụnọ "ụkwụ" dị mkpa - ha na - emepe ọdịiche dị n'etiti ụlọ siri ike na laptọọpụ iji hụ na ikuku na - abanye na usoro ntụrụndụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike weghachite batrị laptọọpụ ahụ, jikọọ chaja ma lelee ya na ọrụ. O yikarịrị ka ị ga-achọpụta na laptọọpụ ahụ malitere ịrụ ọrụ dị jụụ na ọ bụghị ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-adịgide, laptọọpụ ahụ kwụpụkwara, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbochi ma ọ bụ ihe ọzọ. N'isiokwu na-esonụ, m ga-ekwu banyere otu esi ehichapụ laptọọpụ ahụ na ájá, dochie mmanụ gri na mmiri na-eme ka ọ bụrụ na m ga-ekpochapụ nsogbu na-ekpo oke ọkụ. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe ọmụma gbasara ngwaike kọmputa dị mkpa ebe a: ọ bụrụ na ịnweghị ha na usoro akọwapụtara ebe a enyereghị aka, ana m akwado ị kpọtụrụ otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ kọmputa.